Iindaba - Kutheni sikhetha i-valve yesango lentsimbi yentsimbi ye-NSW
I-Newsway Valve (NSW) Inkampani ineminyaka engaphezu kwama-20 yamava kuyilo, imveliso kunye nokuthunyelwa ngaphandle kweevalvu zentsimbi ezibunjiweyo. Inkampani ilawula ngokungqongqo iimveliso ngokuhambelana nenkqubo yokulawula umgangatho we-ISO9001 ukuqinisekisa ukuba ivalve nganye ekhutshiweyo i-100% ifanelekile.
Inkampani yethu isebenzisa imveliso ye-manipulator automation, iiyure ezingama-24 ngosuku ngaphandle kokuphumla, ukusebenza kakuhle kwemveliso, ukuhanjiswa okukhawulezayo. Vumela inkampani yakho ukuba ingabi naxhala malunga nomhla wokuhanjiswa.
I-NSW yenza iivalvu zentsimbi ezibunjiweyo kuquka iivalve zesango lentsimbi yomkhandi, iivalvu zeglowubhu zentsimbi ezibunjiweyo, iivalvu zetshekhi zentsimbi ezibunjiweyo, iivalve zentsimbi ezibunjiweyo, intsimbi ebunjiweyo y iivalvu zokuhluza kunye nokuninzi. Iivalvu zentsimbi ezenziweyo zifumaneka ngobukhulu 1/2″ ukuya 4″ kunye noxinzelelo CLASS 800, CLASS 150 ukuya CLASS 2500.
Imveliso yenkampani yeevalvu kumgangatho wemeko, ixabiso likwanokhuphiswano oluthe ngqo lwemarike.
Ixesha lokuposa: Oct-05-2021